Ukuba amalungiselelo am ohambo ayatshintsha ngenxa yeCOVID-19, zeziphi iindlela zokurhoxisa endinokukhetha kuzo? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ukuba amalungiselelo am ohambo ayatshintsha ngenxa yeCOVID-19, zeziphi iindlela zokurhoxisa endinokukhetha kuzo?
Ukuze wazi ukuba zeziphi iindlela zokurhoxisa nezokubuyiselwa imali onokukhetha kuzo ngoku, yiya kwindawo ethi rhoxisa ukubhukisha kwakho uze ukhethe indawo ethi Amalungiselelo am ohambo atshintshile ngenxa yobhubhane weCOVID-19.
Uza kusoloko ukwazi ukukhetha kwezi zinto:
Ukubuyiselwa yonke imali yakho ngokuthi ufake amaxwebhu asemthethweni ukuze ahlolwe
Usenokuboniswa enye yezi zinto zilandelayo onokukhetha kuzo okanye ezingakumbi, kuxhomekeka kwiintsuku ozibhukishileyo nezokubhalisela ukufika kwakho:
Isaphulelo onokusisebenzisela uhambo ngenxa yeemeko ongenakuzinceda
Ucele umbuki zindwendwe wakho akubuyisele yonke imali yakho
Iqela elinceda intsapho yethu liza kukwazi ukukunika kuphela izinto onokukhetha kuzo ezifana nezi zikhoyo kwi-intanethi.
Ukuba uyagula ngenxa yokuba wosulelwe yiCOVID-19, leyo imeko isoloko iqukiwe Kwipolisi yethu eqhelekileyo Yemeko Ongenakuyinceda, ibe unokukhetha indawo ethi “Ndinemeko endingenakuyinceda” xa urhoxisa.
Ukucela umbuki zindwendwe akubuyisele imali engakumbi
Ukuba ukubhukisha kwakho akukwenzi ufanelekele ukubuyiselwa yonke imali yakho, unokuthumela umyalezo kumbuki zindwendwe wakho ubone ukuba angakulungela na ukukubuyisela imali engakumbi esebenzisa Iziko Lezemali.
Ndizibuyisela njani iindwendwe zam imali yazo?
NgoMatshi 11, uMbutho Wezempilo Wehlabathi (iWHO) ubhengeze ukuvela kwecoronavirus, eyaziwa ngokuba yiCOVID-19, njengobhubhane wehlabathi lo…